Uqoqosho olutsha: Yinike kude | Martech Zone
Uqoqosho olutsha: Yinike kude
NgoMgqibelo, Oktobha 7, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Google Blogoscoped iingxelo kwi Inqaku leReuters ukuba ukukhangela okutsha kwincwadi kaGoogle, apho baskena khona iincwadi ngaphandle kwelungelo lokushicilela kwaye bazibeka kwi-intanethi, eneneni kuyanceda ekuthengiseni iincwadi.
Uphendlo lweencwadi kuGoogle lusincedile sajika abakhangeli baba ngabathengi, utshilo uColleen Scollans, umlawuli wentengiso ye-Intanethi yeOxford University Press
Andiqinisekanga ukuba ndiza kuyithetha njani le nto, kodwa ndibhale malunga nale meko kancinci. Ukuyinika ukwenza imali… kwenzeka njani oko? Ewe kunjalo. Ayisiyondlela intsha. Emva kwayo yonke loo nto, oonomathotholo basinike iingoma abantu abaye bayokuthenga kamva Umzi mveliso womculo uyoyika ukhuphelo, kodwa ngumlo ongenamsebenzi. Iinkqubo zoontanga ziya kuqhubeka ukuphucula kwaye zibonelele ngeendlela zokuhambisa iifayile zingafunyanwanga. Umhla uza kuza, kungekudala, apho i-RIAA kufuneka iyeke ukulandela kwabo amatyala kunye nokwakha imodeli yeshishini elingcono. Ukusukela ekubeni yenye yeNapster / Metallica yoqobo iyala, andikaze ndithenge enye imveliso yeMetallica. Ngaphambili, bendinayo yonke into yeMetallica… andiqinisekanga ukuba ingakanani imali uLars kunye nabasebenzi abalahlekileyo ngokunqamleza omnye wabalandeli babo, kodwa ibiyinto eninzi. Ewe, incasa yam emculweni iguqukile ngokuhamba kweminyaka… icekeceke ngoku. 🙂
Isoftware ayifani. Yahoo! Kutshanje kuqatshelwe ukuba bazakusasaza isicelo sabo se-imeyile ngokukhululekileyo ukuze abathengi bakwazi ukwakha usetyenziso ngeenxa zonke. Uncedo? Basasaza italente yeshishini kunye nobuchule ngaphaya kweendonga zenkampani yabo kwihlabathi. Njengoko abantu abaninzi besakha izicelo, umnqweno wokusebenzisa i-Yahoo! njengoko i-ISP yokhetho ingazukuthinteleka. Ndingumthengi omnye ongafuniyo ukushiya… izixhobo ezinje ngokhuseleko lweNtsholongwane, ukukhuselwa kweSpam, izixhobo zokongamela zabazali, Qalisa… zonke zindenza ndifune ukuhlala neYahoo DSL. Kwaye inkonzo yePro imnandi, andikaze ndiphume ngaphezulu kwemizuzu.
Ngoku iincwadi! Abo babonileyo kwaye bafunda ibhlog yam bayazi ukuba ndiyincwadi yokuzingela. Andinayo ilayibrari enkulu kakhulu, kodwa uya kufumana iincwadi naphi na kwindawo yam. Ndizithanda kakhulu iincwadi ezinoqweqwe oluqinileyo (ke ndiyavuma ukuba ndiyazithenga iincwadi zokwenza ikhava yazo). Ubuhle bam bamva ngu
ICapote kwigazi elibandayo. Emva kokubukela amazing movie, ndaphefumlelwa ukuba ndifunde incwadi.
Iiblogi lolunye uhlobo lokuyinika imali. Ndifundile (ezininzi kakhulu) iibhlog kwaye ndiziqokelelele ubutyebi bolwazi malunga ne-Injini yokuKhangela, i-Social Media, iNkqubo, uLawulo, ubuNkokheli, njl njl. Okumangalisayo kukuba, ndisandula ukuthenga eyona ncwadi intsha kaSeth… umxholo owawufunyenwe waququzelelwa kuye blog… Kwaye ndathenga incwadi emva kokubona ibhengeziwe kwibhlog yakhe. Ke uSeti ebesele endinika yona ... kwaye ndiyithengile, nam! Uye wayinika imali!
Ibhlog yam ayizisi lukhulu kwindlela yengeniso ethe ngqo. Nangona kunjalo, ibe yindlela elungileyo yokufikelela kumathuba ambalwa nakubathengi. Ndonwabe ngokwenza uthethwano kwiMithombo yeendaba yeNtlalo, ukubonisana ngeDatabase, ukuphuculwa kweMephu zikaGoogle, ukuphuculwa kweWordPress, kunye nokusebenzisana kwiMithombo yeendaba entsha ishishini (isaphuhliswa). Uninzi lweshishini alunakufumaneka ngaphandle kwebhlog yam.
Abanye abantu banokucinga ukuba ukuthumela ulwazi lwakho kwi-intanethi kukubeka ngaphandle simahla kwaye uya kuyikhulula imali. Into endiyifumeneyo kukuba uninzi lwabantu alujonganga 'ukuba' ulwazi; endaweni yoko, ukufuna kwabo abantu abanolwazi! Ibhlog yenye yeendlela ezilungileyo zokubonelela abathengi bakho ngolwazi abanalo ukuze bakufumane ufanelekile ukuqesha okanye ukubonisana nalo.
Olu luqoqosho olutsha. Ukuba awuyikhuphi imali, omnye umntu uya kuyenza!
Ukwahlula ukutya kwakho ngemifanekiso
Oktobha 7, 2006 ngo-11: 32 PM
Omnye alandele le… iindaba ze Zonke iiMP3 ibetha umnatha… indawo engekho mthethweni yokukhuphela isiRashiya enikezela ukhuphelo lweMP3 ngaphandle kolawulo lwamalungelo edijithali kunye namaxabiso angabizi kakhulu.
"Ulawulo lweAllOFMP3.com alunalwazi ngemithetho yelizwe ngalinye kwaye alunatyala ngezenzo zabasebenzisi bamanye amazwe."